Silk Fibroin Nano / Microspheres - Shiinaha Simatech
Alaabta Tani waa been la isticmaalayo hal-tallaabo, hab dareeraha-free, oo waxaa la siiyaa sidii labada ganaax biyo ama budo lyophilized, taas oo loo dhaba ayay dib-u-kala diri karaa in biyaha inta aan la isticmaalin.
Magaca Kale: fibroin Silk nanoparticles / microparticles
Silk fibroin siinayo protein-ku-saleysan iyo nanospheres siiyaan fursadaha cusub ee loogu talagalay bixinta daroogada iyo codsiyada kale sabab u tahay iyagoo biocompatibility, biodegradability iyo daroogada tunable loading iyo sii daayo guryaha, gaar ahaan protein daroogada / peptide iyo daawooyinka biyo-beelaya. The oolnimada encapsulation sare iyo kinetics sii daayo daroogada controllable lagu gaari karaa iyada oo loo marayo gacanta ku content beta-sheet crystalline in qalabka Xariir.
Our Nano Xariir lahaansho / microspheres yihiin been la isticmaalayo hal-tallaabo, hab dareeraha-free, oo waxaa lagu bixiyaa sidii labada ganaax biyo ama budo lyophilized, taas oo loo dhaba ayay dib-u-kala diri karaa in biyaha inta aan la isticmaalin.
Halbeegga iyo hantida
Size of nanosphere: waa la kala duwanaayeen karaan kala duwan ee 100-1000 nanomitir;
Size of microsphere: waa la kala duwanaayeen karaan kala duwan ee 1-100 micrometers
Jaantuska 1 EM ee nanosphere fibroin Xariir (500 nm) Jaantuska 2 EM Xariir microsphere fibroin (2-3 μm)
Alaabta Tani waa wax soo saarka kartoo. Waxaan ku siin karaan taxane ah nanospheres ama microspheres leh oo aan loading daroogada sida ay codsiyada aad.
Previous: Silk Fibroin daadata Kaalmaynta
Next: Invisible iyo Peelable Silk Fibroin Film
Silk Fibroin Microparticles Protein
Silk Fibroin Microspheres Protein
Silk Fibroin Nanoparticles Protein
Silk Fibroin Nanospheres Protein
Microparticles Protein Silk
Microspheres Protein Silk
Nanoparticles Protein Silk
Protein Silk Nanospheres